‘यौन बेचेरै पैसा कमाउने भए वेश्यालय खोले हुन्छ’ – Sourya Online
‘यौन बेचेरै पैसा कमाउने भए वेश्यालय खोले हुन्छ’
सौर्य अनलाइन २०६९ असार ६ गते ४:४८ मा प्रकाशित
पर्वतको कुश्मा बजारमा जन्मेका निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछाने भारतको आसाममा लामो समय फिल्म अध्ययन गरी नेपाल फिरेका हुन्। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको एकांकी ‘बोक्सी’माथि फिल्म बनाएपछि लामिछाने पछिल्लो समय थप चिनारीमा आएका छन्। ग्रामीण नेपाली महिलाको एक दिनको दिनचर्यालाई ६ मिनेटमा प्रस्तुत गरिएको सिनेमास्कोप चलचित्र ‘द मिरर’ (ऐना) को पनि उनले निर्माण गरेँ। ‘द मिरर’ मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भयो। लामिछानेले निर्देशन गरेको फिल्म ‘किन लाग्छ माया’ असार ८ गतेदेखि रिलिज हुँदैछ। अलगधारको फिल्मबाट मूल धारमा प्रवेश गरेका लामिछानेसँग सौर्यले गरेको कुराकानी :
अलगधारको फिल्मबाट एक्कासि मुख्य धारको फिल्ममा झुल्किनुभो नि ?
फिल्म सानो पर्दाको होस् वा ठूलो, मुख्य कुरा कथा हो । फेरि मेरो सपना जपना नै राम्रा कला फिल्म बनाउने राम्रो निर्देशक बन्ने हो । ती अलगधारका सिनेमाबाट मैले राम्रो परिचय पाएँ । र, अब ‘ठूलो पर्दाका फिल्म पनि बनाऊँ, केही नयाँ गरुँ’ भनेरै ठूलो पर्दामा आएको हुँ ।
‘किन लाग्छ माया’ मा अरू मुख्य धारका फिल्मभन्दा ‘नयाँ’ के गर्नुभएको छ त ?
‘किन लाग्छ माया’ प्रेमकथामा निर्माण गरिएको छ । यसमा हाम्रो टिमले निकै मिहिनेत गरेको छ । मायाको मूल अर्थमा घोत्लिने प्रयास गरेका छौँ यसमा । अहिले यु–ट्युबमा राखिएका केही ‘प्रोमो’ र ‘ट्रेलर’ हेरेर कहिल्यै फिल्म नहेर्ने दर्शक पनि नेपाली फिल्म ‘बिग्रिएको’मा चिन्ता गरिरहेका बेला हामीले यसमा कुनै यौन क्रियाकलापका दृश्य र फुटेज प्रयोग गरेका छैनौँ । यो एउटा शुद्ध पारिवारिक र सभ्य फिल्म हो ।
चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मको बजार सुकेकाले संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला चलेको ‘लुट’ले नेपाली फिल्मको ट्रेन्ड बदलिदिएको बताइँदै छ नि †
मलाई ‘लुट’ले ट्रेन्ड नै बदल्यो भन्ने लाग्दैन । नेपाली फिल्ममा नयाँ टेस्ट दिएको चाहिँ हो । स्टोरी टेलिङ, संवाद पक्षमा निकै फरकपन ल्यायो । तर, यसले नै बजार विस्तारका लागि ढोका खोलेको भने होइन । राम्रो फिल्म बन्न निर्देशकको निकै मिहिनेत हुन्छ । हाम्रोमा राम्रा फिल्म बनाउनुभन्दा पनि धेरै बनाउनमा हानथाप हुन्छ । केही नजानेका दुई पैसे, दुई/चार फिल्म हेर्दैमा निर्देशक बनिटोपल्नेहरू बढ्दैछन्, त्यसैले यस्तो खराब अवस्था आएको हो, ‘लुट’ राम्रो बन्नुमा निर्देशक र स्क्रिप्टको ठूलो भूमिका छ ।
अनि ‘किन लाग्छ माया’चाहिँ दर्शकले रुचाउँछन् त ?
सक्दो मिहिनेत गरेको छु । कथा भन्ने नवीन शैली र आºनोपन दिने मेरो प्रयास छ । यो शुद्ध र मीठो प्रेम कथा हो, जहाँ फोहोरी माया हुँदैन र दर्शक घर पुगेपछि पनि फिल्मलाई लिएर एकछिन घोत्लिन्छ । अहिलेका मूलधारको भन्दा फरक धारमा निर्माण गरिएकाले यसलाई दर्शकले पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ ।
फिल्मको दृश्य, संवाद र पृष्ठभूमि कुन ठाउँका हुन् ? सबै ठाउँका दर्शकले आºनोपनको अनुभूति गर्लान् ?
यसका दृश्यले पर्वत र म्याग्दीका स्थानलाई समेटेको छ । मुलुककै अग्लो कुश्मा ज्ञादी झोलुंगेपुलमा पनि छायांकन गरिएको छ । स्थानीय लवज, संस्कृति यसमा आउँछन् । समग्र नेपालको सामाजिक कथावस्तु रहेकाले सबैलाई छुन्छ ।
मूलधारका भनिने फिल्मले यौनबाहेक अरू कुरालाई विषय नै देख्न छोडे, ‘किन लाग्छ माया’मा पनि यौन दृश्य छन् कि ?
यौन र हिंसाले फिल्ममा बढी नै स्थान पाउन थालेको छ । कथाले गाली बेइज्जती मुद्दा लाग्नेजस्ता दृश्य र संवाद राखेका छन् । त्यसैले हो, हिजोसम्म बिकिरहेको ‘माल’ आजदेखि बिक्न छोडेको । यसले गर्दा फिल्ममाथिको लगानी खतरामा पर्‍यो । फिल्म त कथाले चल्ने हो, यौनले होइन । यदि यौनलाई मात्र फिल्ममा पस्केर पैसा कमाउने हो भने सबै निर्देशक मिलेर रन्डीखाना खोले हुन्छ । ‘किन लाग्छ माया’मा कुनै यस्ता दृश्य छैनन् । हाम्रो स्टोरी टेलिङ सरल छ, दर्शकलाई टर्चर हुने हिंसाका दृश्य पनि छैनन् ।
यौन दृश्य र छाडा संवाद बढेपछि चलचित्र विकास बोर्डले अब फिल्मको स्क्रिप्ट नै बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्यायो नि ?
स्क्रिप्ट नै सेन्सर गर्ने नियम ठीक हो तर, यसले राम्रो ऐन बनायो भने मात्रै । तर, सेन्सर बोर्ड त जहिल्यै वाहियात काम गर्छ । ‘लुट’, ‘चपली हाइट’मा साह्रै भद्दा र अश्लील संवाद पनि सेन्सर नगरेको सेन्सर बोर्डले ‘किन लाग्छ माया’को ‘लाटोले केरा हेरेजस्तो’ संवादमा ‘लाटो’ शब्द काटेको छ र ‘रन्डी’ भन्ने शब्द पनि काटेको छ ।